Baarlamaanka oo laga codsaday inay codka kalsoonida ah siiyaan golaha Wasiirada cusub – Radio Muqdisho
Qeybaha bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan caasimadda iyo qeybo ka mid ah gobollada dalka ayaa Barlamaanka Soomaaliyeed u soo jeediyey in ay golaha wasiirada ka gaaraan go’aan shacabka Soomaaliyeed ay ku farxaan oo ah in ay meel mariyaan xukuumadda cusub.
Bulshada Soomaaliyeed oo ka hadlayey aragtidooda ku aaddan in golaha wasiirrada cusub, ayaa sheegay in xilligan ay lagama maarmaan tahay in xukuumadda cusub ay hesho kalsoonida Barlamaanka, si ay dalka u gaarsiiyaan hiigsiga 2016-ka, waxa ayna cod dheer ugu baaqeen Xildhibaannada golaha shacabka Federaalka Soomaaliya in ay golaha wasiirrada ay ogollaadaan oo aysan gaarin go’aan shacabka Soomaaliyeed niyad jabin kara.
Sheekh Nuur Baaruud Gurxan oo ka mid ah Culimada Soomaaliyeed, isla markaana ah Afhayeenka hey’adda Culimada Soomaaliyeed, ayaa walaac ka muujiyey haddii ay Barlamaanka Soomaaliya kalsoonida u diidaan golaha Wasiirrada waxa ka dhallan kara, waxa uuna ku baaqay in ay tanasul sameeyaan golaha Shacabka Federaalka Soomaaliya.
“Haddii aan is ceshan weyno oo aan tashan wayno, waa inoo talin, waxyaabo aan hadda garaneyn oo Soomaali mustaqbalkeeda fog dhibaato ku keeni karta baa dhici karta, hiigsiga cusba oo aan sugeynayay in aan gaarno doorasho aysan dhicin, marka waxaan leeyahay kalsoonida shacabka, yaa la luminin” ayuu yiri Sheekh Nuur Baaruud.
Qaar ka mid ah shacabka oo la hadlay Radio Muqdisho ayaa xusay in golaha wasiirada cusub ee Soomaaliya ay horyaalaan arrimo badan oo ay ugu horeyso hirgelinta Nidaamka Federaalka ah, dib u eegista dastuurka dalka iyo gaarsiinta dalka doorashooyin xor ah, iyadoo la meel marinayo hiigsiga cusub ee sanadka 2016-ka.
Shacabka waxa ay Baarlamaanka ka codsadeen in ay codka kalsoonida ah siiyaan golaha Wasiirada, maadaama Xildhibaanada ay wakiil ka yihiin shacabka Soomaaliyeed, ayna tixgeliyaan codsiga baarlamaanka uga imaanaya bulshada qeybaheeda kala duwan.